Sidee si ay u gudbiyaan Apps, Xiriirada, Music, SMS iyo in ka badan ka HTC in HTC
Sidaas daraaddeed anigu doonayn HTC ah muddo laba sano ah, oo kaliya amar ku cusub HTC Mid ka mid X. ah Sidee baan u fudud ugu guuraan xogta oo dhan aan ka badan? Walwalsan xiriirada, sawiro ama videos Waxaan ahay.
Yaaban sida ay u wareegaan ka HTC hore la mid ah oo cusub? Waa neecaw. In this article, Waxaan jeclaan lahaa inaan idin ​​tusin HTC xirfadle in qalab kala iibsiga HTC - desktop-ka Wondershare MobileTrans software. Read ku article iyo xiriirada kala iibsiga, barnaamijyadooda, qoraalka, fariimaha, abuse wac, videos, sawiro iyo music ka HTC in ka dib HTC.
Qeybta 1: Sidee si ay u gudbiyaan Content ka HTC in HTC la MobileTrans
Qeybta 2: Xulashada More si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in HTC
Ka HTC Bedelka Content in HTC 1 Click
The Wondershare MobileTrans ku siinayaa awood ay ku raalli ka HTC wareejiyo HTC aan ka kaaftoomi kasta.
Bedelka oo dhan xiriirada, jadwalka, barnaamijyadooda, photos, music, fariimaha qoraalka ah, abuse wac & videos.
Nuqul xiriir Full la horyaalka shaqo, cinwaanka email, magaca shirkada iyo ka badan.
Ma HTC oo kaliya, sidoo kale si fiican u la shaqeeyaan Samsung, Sony, Motorola, Google, LG iyo qalabka Android dheeraad ah.
Alaabtayda oo u dhexeeya HTC, Nokia (Symbian) iyo iDevice dhaqaaq.
Khatarta-xor ah oo ka kooban waxaa ku wareejinaya waa 100% la mid ah sida mid ka mid ah asalka ah.
Dadka isticmaala Mac, waxaad u tagi kartaa si Wondershare MobileTrans u Mac
Nuqul Nokia in HTC
Sidee si ay u gudbiyaan HTC Data in HTC la MobileTrans
: Taageerayaan HTC OS From Android 2.1 si ay Android 4.4 daydo taageerayaan HTC: HTC Mid ka mid ah M8, HTC Mid ka mid ah X, ugaar S A510E, waxaan jeclahay, A9191 doonayay oo HD, ugaar, waxaan jeclahay oo HD, HAL V, Droid DNA, PC36100, HD2, dareen Z710E, Wixii la doonayay oo S, Explorer A310e, Cajiib S, iyo in ka badan >>
Tallaabada 1. Orod HTC in ay Tool Transfer HTC
First of dhan, ordo HTC in ay HTC qalab kala iibsiga xogta - Wondershare MobileTrans on PC. By gujinaya Start , aad tagto HTC in ay suuqa kala iibsiga HTC.
Tallaabada 2. Connect Laba Qalabka HTC in PC
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan laba qalabka HTC si aad u PC. Markaas, qalabka muujin doonaa labada qalab ee ay suuqa kala, sidii loo muujiyey in shaashada ku yaal dhinaca midig.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Calendar, Music, Photos, SMS, Videos, abuse Call iyo Apps ka HTC in HTC
By default, dhammaan xogta loo gudbin karaa waa la saxay. Si aad u gudbiyaan oo dhan, kaliya aad u baahan tahay inaad riix Start Copy. Ama, uncheck kuwa aad loo baahnayn ka hor inta gujinaya Start Copy .
Fiiro gaar ah: yaabban wixii macnaha xogta oo cad ka hor inta nuqul ? Waa Sax, iyo qalab ka saari doonaan xogta baahisey ku saabsan qalabka HTC caga.
Download software ah in ay beddelaan HTC in HTC la mid click!
Nuqul Xogta laga Android inay HTC
Nuqul Xiriirada ka HTC in Samsung
Best Alternative Maamulaha HTC nidaameed
Xogta laga BlackBerry dhaqaaq Android
Xiriirada Transfer in New Android
Demi Symbian in Android?
Bedelka Lugood Music inay Android Phone
Xulashada More si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in HTC
Oo weliba waxaa desktop-ka Wondershare MobileTrans, shirkadda HTC ayaa sii daayay ah .apk file magacaabay Transfer HTC Tool . Waa lacag la'aan ah oo loo isticmaali karo si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha, goobaha, Bookmarks, wallpaper, sawirada camera iyo video, music iyo kalandar ka HTC in HTC ka mid ah. Qalabka HTC in aad raalli ka wareejiyo waa ordi Android 2.3 ama wax ka sareeya.
Faa'iido: Lacag la'aan Qasaarooyinka: Kaliya wareejiyo files si HTC Mid ka mid ah
Talaabada 1: On aad HTC Mid ka mid cusub, tuubada Settings > content Transfer > HTC Android phone .
Talaabada 2: Download iyo rakibi Google Play ah ee aad taleefan jir, ka dibna soo baxdo iyo rakibi HTC Transfer Tool.
Talaabada 3: Raac on-screen alaabtii muusikada labada telefoonada HTC si ay u xubnuhu. Hubi musmaarradiisa oo soo bandhigay labada telefoonada HTC waa isku mid.
Talaabada 4: Tag hore phone HTC iyo sax content aad rabto in lagu wareejiyo, ka dibna, riix Start . Waxay qaadataa waqti. Sug inta suuqa kala iibsiga la soo gabagabeeyo.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Apps, Xiriirada, Calendar, Music, SMS iyo More ka HTC in HTC